A ezihlukahlukene cocktail - isici imenyu noma isiphi isitolo sokudla ezinkulu. Kodwa uhlu olude amagama angafakwa ku umuntu stupor unsophisticated. Kulesi sihloko sizoxoxa ngezindlela ezihlukahlukene cocktail, ngezigaba kanye izinhlobo zotshwala. Ngemva kokuyifunda, umfundi ngeke uqhubeke ukuchitha isikhathi sabo ukutadisha imenyu, egcwele eyinkimbinkimbi imigomo elikhuluma olunye ulimi.
Kunezinhlobo eziningana cocktail. Izinhlobonhlobo kwalezi ziphuzo uyaqonda ngokuphelele ngaphandle ukuthi uweta wotshwala enkantini professional. izivakashi avamile bazi ukuthi "White Russian" libhekisela digestives futhi "Gin Fizz" - isiphuzo eside, hhayi ngempela. Kodwa imininingwane enikezwa ngezansi kuzokusiza ukuqonda ezihlukahlukene ocebile cocktail.
Ukwahlukanisa ngokusebenzisa isikhathi
Njengoba yaziwa, ukuphuza ugologo ekuseni - ukunambitheka embi. Njengoba Nokho, kanye nanoma yimiphi eminye utshwala. Nokho, lokhu akukhona umthetho kuphela ngokuphathelene nesikhathi ukuphuza. Zikhona nezinye ukulinganiselwa. Usiko ukuphuza kubenzima.
Kukhona cocktail okungezona notshwala kanye notshwala. Okunhlobonhlobo zakamuva likhulu ukuze theorists kwebhizinisi yokudlela akuyona lazy futhi wadala ngeengaba eziningana. Ngokusho komunye wabo, ihlukaniswe cocktail oludakayo aperitifs futhi digestives. Eyokuqala ukuba yayala at the bar ngaphambi kokudla. Esesibili - emva. Kukhona umbono wesithathu - cocktail ukuthi ungakwazi uphuze nganoma isiphi isikhathi sosuku (Noma yimuphi Isikhathi Iziphuzo).
Luqala ngokunikela ukudla kwabo. Ngo ezihlukahlukene aperitifs, cocktail udidekile nzima, ngoba ungakwazi igama izingilazi zotshwala ezimbalwa ethandwa yalolu hlobo. okungukuthi:
"Martini drei" inhlanganisela vermouth elomile gin. Kodwa, njengoba kunjalo nganoma iyiphi enye i-cocktail ekulungiseleleni le appetizer akukhona ukuthi kubaluleke kuphela ngezabelo, kodwa futhi izinga izithako. Futhi-ke, ezingeni ikhono uweta wotshwala enkantini. Ngokwe-kadokotela classical ukuba "Martini drei" kuhlanganisa vermouth kanye 60 ml Imininingwane 10 ml i-gin. Glass ngaphambili kube selehlile, egcwele iqhwa. Thela izithako, ivuse ke sokukhipha isiphuzo ngokusebenzisa strainer. Ukuhlobisa "Dry Martini 'enziwe nocezu ulamula, iminqumo.
Ukushaya phezu aperitifs (ngoba ezihlukahlukene cocktail kanye zokupheka - ngesihloko elikhulu), usitshele kafushane mayelana nezinye ingxenye iziphuzo ngenhla. "Manhattan" siqukethe Bourbon futhi vermouth. "Negroni" - gin, vermouth futhi Campari. "Dubonnet" - cocktail isiFulentshi, futhi ngenxa yalokho okulungiselelwe ngesisekelo isiphuzo French ozithandayo - iwayini futhi uvikelwe. "AseKhiri Royal" - inhlanganisela Cassis newayini emhlophe.
Lezi iziphuzo emphakathini ehloniphekile ukuba aphuze ngalobo noma emva kokudla. Kuyini ukubunjwa cocktail? Ukwehlukahluka kwezimangaliso izithako yokudlela ibha ezinhle ikuvumela ukuba hhayi kuphela ukulungiselela nenye iresiphi abadumile, kodwa futhi udale i isiphuzo yasekuqaleni. Digestives - is, eqinisweni, umangalela zonke cocktail ukuthi ningaweli isigaba appetizers. Umngcele phakathi Ngemva Dinner Cocktails (ngemva kokudla) kanye Noma yimuphi Iziphuzo Isikhathi (nganoma yisiphi isikhathi), kodwa kuba abangelutho kusukela umbono owakhileyo. Ngakho uqhubekela Ukwahlukaniswa ukunambitheka iziphuzo, ngalinye elikwazi ngokuphephile ngokuthi digestif.
A ezihlukahlukene cocktail
Ethandwa kakhulu, mhlawumbe, kukhona cocktail omuncu. isithako okuphoqelekile ngamunye wabo - ijusi lemon. Lungiselela endaweni cocktail shaker ezinjalo, ukunakwa okukhulu ikhokhelwa izingxenye zokuhlobisa.
Ngu digestives futhi zihlanganisa cocktail flip. Isisekelo isiphuzo ezinjalo zingaba oludakayo, newayini, sherry. Egg wumkhakha saziso. I cocktail ethandwa iningi lomkhaya - "Porto Flip". It ibhalwe kusuka 45 ml port iwayini, ugologo 15 ml, yebo, iqanda isikhuphasha. Digestives obizwa nangokuthi smash cocktail emelela imimoya, okuyinto ngokuvamile babekhonza yi-ingilazi, ezingekho ngaphezu 75 ml, futhi zokuhlobisa Mint noma basil. Ekugcineni, egqinsiwe isiphuzo. Ukwakheka iziphuzo ezifana ngokuvamile kuhlanganisa owodwa noma ngaphezulu liqueurs.
Yini ongayisho okwengeziwe ezihlukahlukene cocktail? Recipe "B-52" kuchaziwe ngezansi. Kuyaphawuleka ukuthi le cocktail zihlanganisa ezinye theorists yobuciko ukuze smash bar, elinye - ukuba shot-isiphuzo. Ngaphezu kwalokho, ngokuvumelana ngezigaba esifanayo, smash-isiphuzo - ke digestives. Ngokusho kwenye - aperitifs. Ukuze ulahleke obukhulu ihlathi yokudlela Ukuhlakanipha uzokutshela mayelana iziphuzo ethandwa kakhulu (mhlawumbe akekho wasala ungabaza ngokusebenza ngokwehlukahlukana kwabo ocebile).
Ngaphambi kokuba sibale isiphuzo ethandwa kakhulu, kuyafaneleka ukukhumbula imigomo emibili ngaphezulu atholakala ezinkantini imenyu. Okungukuthi, iziphuzo eside, shot-isiphuzo. Isigaba sokuqala sihlanganisa cocktail, ezivame ngakhonza izibuko ubude. Iqembu lesibili - ezifana "B-52", "Black Russian", "Orgasm", "ku-internet Kamikaze".
Shot isiphuzo - cocktail encane, ivolumu salo 50-60 ml. Kodwa uhlu olungezansi, kukhona omunye wabo kuphela. Lonke iphuzu isibhamu inqaba, ngendlela basebenzisa (iziphuzo komunye isiphuzo). "Kamikaze" futhi "B-52" - cocktail, sicabangela isimo esithile, base ungaphuzi phakathi usuku romantic noma ingxoxo bokusungula kokuphumula. Funda kabanzi mayelana nalezi iziphuzo kuzoxoxwa ngezansi. Futhi manje-ke Kuhle kokusho edume kunazo:
"Ubulili phezu Beach."
Lokhu cocktail ibhalwe ngesisekelo amaRom. Isici "Mojito" inala peppermint okuyinto lihambisana lime, iqhwa namanzi soda Akumangalisi yakha umthelela aqabulayo.
Lokhu cocktail kungaba soft. Futhi esikhundleni amanzi soda kuwo ngokuvamile ukungezwa "Sprite". "Mojito" vodka - into ukuthi kungenziwa kuphela ezitholakala nemigoqo Russian. I cocktail edume kunazo-Cuban akukwazi ngaphandle rum. Yingakho singasho ngokuqiniseka ukuthi "Mojito" vodka - akusiyo "Mojito".
Umsuka walo cocktail ligubuzelwe-legends. Kungenzeka, le "UMargarita" okulungiselelwe okokuqala eMexico. Phela, ngenxa yalesi cocktail - i-tequila. Omunye ingxenye kuyinto 35 ml cactus phisa. Okunye izithako: ugologo orange, kalamula. Cocktail ngakhonza ingilazi ububanzi ngonyawo okusezingeni eliphezulu - lokho okubizwa ngokuthi Daisy. Njengoba yenziwe shaker, emaphethelweni ingilazi is elicwiliswe usawoti ngaphambilini olwenziwa kwalo lime locezu.
"Long Island Iced Itiye"
Esikhathini yoma, endaweni yokucima ukoma eLong Island laqanjwa cocktail, okuhlanganisa izinhlobo ezinhlanu utshwala: vodka, utshwala, i-gin, i-tequila, cointreau. Ngokusho iresiphi zakudala, izithako kufanele buhlanjululwe "Coca-Cola", kalamula noshukela isiraphu.
Igama lalesi cocktail akugcini nje Barfly ezaziwayo. "Pinakolada" - ngempela isiphuzo ethandwa, ikakhulukazi phakathi ubulili fair. Cocktail kuyahluka mnene, ukunambitheka omnene. izingxenye zalo - rum, uphayinaphu juice, lukakhukhunathi ice cream.
On ukwakheka kwalesi cocktail ulula. Kuhlanganisa tequila nelithi ulamula. Nokho, ukusetshenziswa imicikilisho ethile "Tequila Boom" kancane convoluted. I elula kunazo: ikhava ingilazi ngendwangu izikhathi eziningana ukuba hit kubo kubha, bese isiphuzo. Kukhona futhi ngezindlela eziningi zokudala, isibonelo ngokuzenza ukwakhiwa nomakalabha futhi ukusetshenziswa nesando. Nokho, izindlela ezifana Site kwabangane esisondelene abangane.
"Edayisa ukudla kwamazwe ahlukene"
Ukuze ulungiselele lokhu cocktail kudingeka ugologo orange, cranberry juice, lemon, likagologo. ethandwa yakhe "ukudla kwamazwe ahlukene" ubophekile ukuba umculi Madonna, owake wabonakala ku emoyeni nge ingilazi-Martinka ezandleni (lena uhlobo ibha ware yakhelwe ukondla cocktail).
Lokhu cocktail siphathelene shotam esesikhulume ngazo. Ngokuvamile, "B-52", kanye nezinye izinhlobo zophuzo ukuthi isigaba kakhulu ezifunwayo amakilabhu ebusuku. I zokudlela elite shot-isiphuzo oda akusiyena ngakho asebenzayo. Lezi cocktail unekhono ukungena umuntu imizuzu embalwa esimweni lokudakwa.
Lungiselela "B-52" ekhaya kunzima, hhayi kokuba ikhono elifanele. Professional njengoba ibhizinisi lakho emizuzwini emibili noma emithathu nje, lokhu kwakha wobuciko elincane art kwebha. A cocktail ehlanganisa Kahlua, Cointreau futhi BelISA. liqueurs izingqimba aqambe amanga ngokushelela, futhi ngaleyo ndlela ngeke aphule ukulandelana kwalokho izithako. Khona-ke cocktail Ignite, utshani eside elicwiliswe shot (leli gama libizwa ingilazi uqobo futhi lapho cocktail encane olungiswayo) kanye isiphuzo.
Lokhu isiphuzo eside wathenga ngokuvamile amantombazane. Emangelengele izandla besilisa ingilazi abade nge liquid okwesibhakabhaka, ehlotshiswe uphayinaphu, cherry nezinye izakhi of Decor uweta wotshwala enkantini, uyobheka inharmonious. Cocktail Ukwakheka: 50 ml i-vodka, Curaçao okwesibhakabhaka, "Sprite" lime ice.
Lokhu cocktail ngokuvamile babekhonza engilazini efanayo njengoba "UMargarita". Siqukethe rum, ushukela isiraphu kalamula. Izithako kahle ngesiswebhu endaweni shaker bese batheleka ingilazi, emaphethelweni awo ehlotshiswe tincetu izithelo.
"Ubulili phezu Beach"
Kakhulu "abanothando" cocktail bartenders, anjengezixhumo langaphambilini, ibhalwe ngendlela shaker. Izithako: vodka, ugologo zamapetshisi, cranberry kanye uphayinaphu juice, iqhwa. Ukuxuba lezi izithako kudala Nokho, umphumela tebuciko okungavamile okungukuthi, kanye nanoma iyiphi inhlanganisela Liquors ne juice.
Lesi sihloko ayetfulwanga ezihlukahlukene egcwele cocktail. Ezweni (esesithombeni ngenhla iziphuzo ezivamile kuphela) ezingenakubalwa yabo. Kodwa sibonga ulwazi olunikeziwe ngenhla, yokudlela eMpumalanga noma ibha kuyoba lula kwimenyu cocktail.
Hen endlini ngezandla zakhe ku izinkukhu 50: idivayisi ukudweba, imishini